प्रतिनिधिसभा विघटन जनचाहना विपरीत भएको आरोप Nepalpatra प्रतिनिधिसभा विघटन जनचाहना विपरीत भएको आरोप
प्रतिनिधिसभा विघटन जनचाहना विपरीत भएको आरोप
रुपन्देही । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरुले सरकारले जनचाहनानुरुप काम गर्न नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन् । बुटवलमा आज आयोजित सभामा नेकपाका अध्यक्षद्वय माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेताहरुले सरकारले नेपाली जनताको भावना र चाहना नबुझेको र यसबाट समस्या भएको बताउनुभयो । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको र सरकारले समय तोके पनि निर्वाचन हुन असम्भव रहेको विचार व्यक्त गरे ।
सभामा नेकपाका अध्यक्ष नेपालले ४४१ सदस्यीय नेकपा मात्रै वैधानिक रहेको भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले आफ्नो समूह नै मुख्य पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो । “निर्वाचन आयोगले ४४१ को बहुमत जहाँ छ त्यो मूल पार्टी हो भनेको छ । त्यसैले हामी नै मूल पार्टी हौँ ”, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो ।
अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकताको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीले तीन वर्ष नबित्दै सहमति तोड्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई समृद्धिको बाटामा अघि बढाउनाको साटो प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग गरेर जनचाहनाविपरीत काम गरेको धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एक ठाउँमा आउन सबैलाई अपिल गर्नुभयो ।
पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य घनश्याम भुसालले समृद्धि र समाजवादतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार गलत बाटामा हिँडेको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीले लिएको बाटो छाडेर एक्लै अगाडि बढ्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै पूर्वमन्त्री भुसालले पार्टीविरुद्ध पनि आवाज उठाउन तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले सरकारले माओवादी जनयुद्ध र त्यसमा सहभागी घाइते अपाङ्गता भएका पूर्वलडाकुलाई राहत र उपचार गर्न नसकेको भनाइ राख्नुभयो । सभामा नेकपाका नेता युवराज ज्ञवाली, चक्रपाणि खनाल, ओनसरी घर्तीलगायतले जनचाहनाविपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीवाट हटाउनुपर्छ भन्दै आएका वामदेव किन एकाएक छिरे बालुवाटार ?
चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता बढ्यो फेरि, नेकपालाई पुन: एकता गर्लिन् त ?
ओलीले देव गुरूङलाई हटाए : प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराई नियुक्त
माधव नेपालको सनसनीपूर्ण खुलासा : यसरी हट्दैछन ओली, यस्तो बन्दैछ गठबन्धन